विडम्वना, राजनीतिमा सबै सहमति र वचन लागू हुदैनन् ! - Dainik Nepal
विडम्वना, राजनीतिमा सबै सहमति र वचन लागू हुदैनन् !
निर्मल भट्टराई २०७६ जेठ १७ गते १४:४७
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकता हुनुअघि भएको सहमति हालै सार्वजनिक भएको छ । अन्य विषयका अतिरिक्त त्यस सहमतिमा केपी ओली र प्रचण्डले वर्तमान संसदको पाँच वर्षे कार्यकालमा सत्ता आधा–आधा सञ्चालन गर्ने सहमतिको बुँदा राजनीतिक बजारमा हट केक भएको छ ।
एकता अब केपी ओली र प्रचण्डको सत्ता साझेदारीको विषयभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । नेकपाका लाखौँलाख नेता, कार्यकर्ता, समर्थक शुभचिन्तकको भावनासँग गाँसिएको छ ।
त्यसै त राजनीतिमा धेरै सहमति या त उलंघन गरिन्छन् या त दुवै पक्षबाट बिर्सिइन्छन् । यस्ता सम्झौताहरु (लिखित वा मौखिक)लाई ‘तत्कालीन परिस्थितिको उपज’ भन्ने गरिन्छ । जे सुकै सम्झौता भएर एकता भएको भए पनि नेकपाको नयाँ जीवन शुरु भइसकेको छ । सानातिना विगतका घटना देखाएर कसैले यो एकतालाई उल्टो हिँडाउन सक्दैन । यो एकता अब केपी ओली र प्रचण्डको सत्ता साझेदारीको विषयभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । नेकपाका लाखौँलाख नेता, कार्यकर्ता, समर्थक शुभचिन्तकको भावनासँग गाँसिएको छ ।
यो सहमति सहमतिकर्ताहरुको सहमतिबेगर बाहिर आएको भए दुर्भाग्यपूर्ण हो । प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनको समय आउन लाग्यो भनेर नेकपाको सरकारलाई कमजोर बनाउने खेललाई यो घटनाले मलजल गरेको छ । आज नेकपाका हरेक नेता कार्यकर्ता नेताहरु आफ्नो मर्यादाको सीमाबाहिर आएर पदको लेखाजोखा र लेनदेन गरेको हेर्न चाहदैनन् बरु नेताहरु मिलेर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सार्थक भएको हेर्न चाहन्छन् । नेपाली सत्ता राजनीति र नेकपाको पार्टी राजनीति पुराना सहमतिको मात्र बन्धक हुन सक्दैन । वर्तमानको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अघि बढ्छ । मेरो बुझाईमा राजनीति एक विचित्रको विज्ञान हो, जहाँ सहमति जति औचित्यपूर्ण हुन्छ, सहमतिको उलङ्घन पनि कहिलेकाहिँ त्यति नै औचित्यपूर्ण हुन्छ ।
नेपाली सत्ता राजनीति र नेकपाको पार्टी राजनीति पुराना सहमतिको मात्र बन्धक हुन सक्दैन । वर्तमानको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अघि बढ्छ ।
राजनीतिमा दिईएका वचन र गरिएका सहमति ढुंगाका अक्षर होइनन् । मलाई कहिलेकाहिँ कमरेड प्रचण्डले २०७० साल असोजमा दिएको वचनको याद आउँछ । म तत्कालीन एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गरेको दिन उहाँले आसन्न चुनावमा मलाई समानुपातिक उम्मेद्वार बनाउने र चुनावपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट केन्द्रिय सदस्य बनाउने वचन दिनु भएको थियो । ती दुवै बचन पूरा भएनन् बरु मलाई साविक भक्तपुर नगरपालिका वडा नं १७ को ईन्चार्ज बनाईयो । नेपाली राजनीतिमा गरिएको सहमति र वाचाहरुको दुरावस्थाको अलिअलि ज्ञान भएकोले मलाई त्यसले कुनै फरक पारेन ।
नेपाली राजनीतिमा वचन दिने, सहमति गर्ने र उक्त वचन र सहमति उलंघन गर्ने प्रक्रिया सामान्य बन्दै गएको छ । यसको सबभन्दा बढी जानकार नेताहरु हुनुहुन्छ नै । आशा गरौं, अबका दिनमा दिइएका वचन र गरिएका सहमति कार्यान्वयन होउन् !